Iingcebiso ngobuhle zehydrogen peroxide | Amadoda aQinisekileyo
Iingcebiso zobuhle ezisekwe eHydrogen
El amanzi oksijini ineempawu zokulwa neentsholongwane ezenza ukuba ibe lihlakani elifanelekileyo kunyango lwe induna. Ukuze ukwazi ukwenza le ncam yobuhle ngokusekwe kwi-hydrogen peroxide, kufuneka uqale uhlambe ubuso bakho ngoncedo lwemveliso yokucoca. Emva koko, i-hydrogen peroxide isetyenziswa ngebhola yomqhaphu kwiimpumpa kunye nentloko emnyama.
I-hydrogen peroxide inokuba yinto ephazamisayo eyomileyo pielKe kuyacetyiswa ukuba ungayisebenzisi ebusweni bonke, ukuba kungekuphela kwinqanaba le-acne. Ukuba ungumntu othanda ukuba namabala, ukusetyenziswa kwehydrogen peroxide kunokuba lolunye lolona nyango lusemgangathweni ukunyanga.
Enye yeengcebiso ezivela ubuhle Ngokusekwe kwi-hydrogen peroxide eyaziwayo, ibandakanya ukuyisebenzisa ukukhanyisa iinwele. Yindlela eyongayo nesebenzayo yokufumana umbala kwi iinwele ukukhanya, nangona kunjalo, eli cebiso elenzelwe ekhaya alikukhuthazwa kwiinwele ezimnyama kakhulu kuba isiphumo singangumbala weorenji ongathandekiyo.
iinwele ezimdaka mhlophe bagqibelele ukuzama ukusebenzisa le ncam yobuhle. Ukuze ukwazi ukuhlamba iinwele nge-hydrogen peroxide, xuba isiqingatha sendebe yamanzi nesiqingatha sekomityi ye-hydrogen peroxide kwibhotile yokutshiza uze ufefe lo mxube kwizinwele ezifumileyo. Ke iinwele kufuneka ziveliswe elangeni kangangemizuzu engama-30 ukuze ithoni yeenwele ikhanyiswe. Ngele ndlela, Iimpawu yendalo kakhulu.
Ungalibali ukuba amanzi ioksijini inokutshisa iinwele, yiyo loo nto kungacetyiswa ukuba kusetyenziswe le nto ukufakela umbala rhoqo kwizinwele.
Ngokuphathelele kwizinwele, i-hydrogen peroxide ingasetyenziselwa ukukhanyisa iindawo zolusu eziye zamnyama ekuhambeni kwexesha. Ngaphambi kokuba usebenzise le ncam yobuhle ye-hydrogen peroxide, ungalibali ukuba abantu abaninzi banokuba nayo impendulo zonke izinto okanye ukutshisa ekunxibelelaneni nale mveliso eluswini, ngenxa yoko kuyacetyiswa ukuba wenze uvavanyo lokuxabana ngaphambi kokufaka esi sixhobo.
Okokuqala, coca ulusu ukuba ufuna ukucacisa ngokukhupha. Emva koko, ibhola yomqhaphu inyityilikisiwe kwi-hydrogen peroxide kwaye ifakwe kwiindawo ezichaphazelekayo. Yiyeke isebenze imizuzu engama-20 uze uhlambe ngamanzi amaninzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iingcebiso zobuhle ezisekwe eHydrogen
Unxiba njani ukubhiyozela ubusuku baseSan Juan
Ngokungenazintloni Ukuthetha ngeenwele zamadoda ezipapa